लेखकले सामान्य जस्तो देखिरहने कुरालाई पनि निक्कै मजाले अपरेशन गर्नुहुन्छ । राम्रो लाग्यो :)
तश्विर आफै बोल्छ भनेको त्यसै हैन नि। दिलिप सरको अहिल्लो 06 February, 2012 को पोस्टको बारेमा हजुरको राय के थियो भन्ने जान्न मन लागेको छ मेडम। लौ है कुन कुन कारण रहेछन् भन्नु होला। हा हा।।
समान्य लागे पनि, बाटोमा हिड्दा हिड्दै देखिने अस्थिर दृष्यहरुमा यस्तो गहिरो दृष्टी चाहिँ मान्नै पर्छ।
त्यो 06 February को पोस्टको बारेमा के भन्नु र ? । त्यसमा लेखेको सबै कारण र नलेखिएका अरू थुप्रै कारणहरू पनि छन् मेरो ब्लग ढिला हुनुमा :)। हे हे हे :)
यस्तै छ यो स्साला-- काठमांडू!
--- र यहाँको स्साला--- मौसम!